India Scholarship Selection Results
India Scholarship Written Result
India Scholarship အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်
v အသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆိုင်သော ဘွဲ့ရရှိပြီး မဟာဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ရန် အဆင့်မှီသူ ဖြစ်ရမည်။
v (၁.၁.... Read more
Japan နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ITPEC Examination Designers for FE & AP သို. မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှအလုပ်မူဆောင်များတက်ရောက်ခဲ.
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို. November 29 ရက်နေ.မှ December3ရက်နေ.တွင်ကျင်းပသော ITPEC Examination Designers for FE & AP သင်တန်ုး ကို မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အလုပ်အမူအဆောင်များဖြစ်ကြသော... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများ ကျင်းပခဲ့ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာာလ (၁၈)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် (၉းဝဝ မှ ၁၂းဝဝ) နာရီအထိ၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှို... Read more
India နိင်ငံ Mumbai မြို.တွင်ကျင်းပ သော South East Asia Regional Computer Federation (SEARCC-2011) Conference သို. MCPA အသင်း ဥက္ကဌှတက်ရောက်ခဲ.
India နိုင်ငံ Mumbai မြို.တွင်ကျင်းပသော South East Asia Regional Computer Federation ““Collaboration for Inclusive growth “ ခေါင်းစဉ်ဖြင်. December 12 & 13 ရက်နေ.ထိကျင်းပသော conference ပွဲသို... Read more
“Information System Development Trend” ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှုး၍ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၇)ရက် (စနေနေ့) နေ့လယ်(၂း၀၀) မှ ညနေ(၄း၀၀)နာရီအထိ ရန်ကုန်မြ... Read more